अहिलै देखि तीज गीतमा छमछमी नाच्दै नायिका “बर्षा सिवाकोटी” ! (भिडियो हेर्नुहोस)
यसपालीको तीज गीतमा छमछमी नाच्दै “बर्षा सिवाकोटी” ! (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौ -केही समय अगाडि बर्षा राउतलाई दुई बिचको बिबादबारे स्टाटस लेखेर चर्चामा आएकी सिवाकोटीले फेरि अर्को स्टाटस लेखेकी छिन “रहर छ” । पछिल्लो समयको सर्वाधिक रुचाइएको नायिका वर्षा शिवाकोटी बेला बेला फेसबुक स्ट्याटस, अन्तर्वार्ता र पहिरनले चर्चामा आउने गर्छिन। बेलाबेलामा उनको फेसबुकमा फरकफरक लेखहरु पाइन्छ, उनी आफ्नो नाम सँग जोडिएर आउने सम्बन्धको बारेमा खुलेर ब्याख्या गर्न पनि माहिर छिन् ।
वर्षा अभिनित चलचित्र वीरविक्रम २ हलमा प्रदर्शन भइरहेको छ।’ गत जेठ ३ गतेबाट हलमा आएको चलचित्र वीरविक्रम २ ले दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ । अझ बादल उर्फ बर्षाको सबैले खुलेरै तारिफ समेत गरेका छन् । आज फेरी बर्षाले फेसबुकमा साडी लगाएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै “रहर छ “ भनेर लेखेकी थिईन । के बर्षालाई बेहुली बन्न हतार भएको हो ? त्यो भने समयले बताउने छ।’ “तर बर्षाको फेसबुक स्टाटस कुनै नौलो चाहिँ हैन ।
यस्तै अहिले भने उनी तिज गीतको सुटिङमा ब्यस्त छिन । उनी मात्र होईन उनको दिदी कल्पना सिवाकोटी पनि यस गितको तयारीमा जुटेकी छिन । उनी गायिका हुन । तीज आउनु भन्दा ३,४ महिना अगाडि नै किन तीज गीतको तयारीमा लाग्दैछिन, हेरौ भिडियो ।